7 दिन चकलेट आहार (परिणाम यो प्रति दिन अप गर्न एक किलोग्राम को एक वजन दिन सक्षम छ कि देखाए) सबैभन्दा स्वादिष्ट र प्रभावकारी मध्ये एक छ। यो उत्पादन बस छैन आफूलाई अस्वीकार गर्न किनभने यो, चकलेट प्रेम महिलाहरु को लागि सिर्फ एक godsend छ।
चकलेट आहार बारेमा
7 दिन (परिणाम यो शरीर बोसो मा एक महत्वपूर्ण कमी देखाए पछि, उनको आँखा मा एक पिघल खेल्छ) चकलेट आहार छोटो समयमा एक तीव्र प्रभाव हासिल गर्न अनुमति दिन्छ। यो मोनो-आहार, एक हप्ता भन्दा बढी पछिल्लो जो हुँदैन। यो चकलेट मात्र कफी र प्रयोग पनि समावेश छ।
कफी हरियो चिया बदलिएको गर्न सकिन्छ। पनि आहार समयमा तपाईँले 1.5-2 लिटर, शुद्ध, अझै पनि पानी प्रशस्त पिउने गर्नुपर्छ।
त्यहाँ दुई छन् चकलेट को प्रकार सिस्टम शक्ति छ:
शास्त्रीय। कफी र चकलेट मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
इटालियन। यो कोका सिमी मात्र खाद्य उत्पादन, तर पनि अन्य उत्पादनहरु समावेश छ। यो पहिलो भन्दा अझ कोमल छ, तर त्यहाँ खाना सेवन मा केहि प्रतिबंध हो।
दुवै पहिलो र दोस्रो विकल्प एकदम प्रभावकारी छ, र के रुचि गर्न - महिला आफु समाधान छ।
चकलेट कस्तो आहार चयन गर्न?
सबै भन्दा राम्रो चकलेट आहार भोजन - तीतो। यो 50-75% कोका वा 33% कोका घिउ समावेश गर्दछ। यसलाई कोका को उत्पादन मात्र चिनी र एक विकल्प बनेको पर्छ भनेर विश्वास छ। केही महिलाहरु रुचि तीतो चकलेट दूध वा आहार समयमा यी उत्पादनहरु को संयोजन।
चकलेट प्रयोग प्राकृतिक कोको क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम र पोटासियम मा धनी छ। यो flavonoids, असंतृप्त फैटी एसिड, एंटीओक्सिडेंट र अन्य कुनै कम उपयोगी पदार्थ पाइन्छ। तसर्थ, additives बिना गाढा चकलेट निम्नानुसार संचालित:
यो प्रतिरक्षा प्रणाली बढावा;
कक्षहरूको बुढ्यौली रोक्छ;
कोलेस्ट्रल देखि जहाजहरु खाली;
रगतमा हेमोग्लोबिन normalizes;
को मानसिक काम सकारात्मक प्रभाव;
यो हृदय रोग, क्यान्सर र अन्य pathologies को घटना रोक्छ।
आहार एक्लै तीतो लागि सबै भन्दा राम्रो चकलेट। यो बारहरू, मिठाई, सेतो वा मधुमेह कोका उत्पादन, जोडी चीनी नगरी छैन प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ।
नियम चकलेट आहार
7 दिन (परिणाम प्रति दिन 500 ग्राम को वजन कमी सुझाव, तर विशेषज्ञहरु लामो खतरनाक छ यस्तो आहार मा बस्न भनेर चेतावनी) चकलेट आहार केही नियमहरू अनुपालनको आवश्यक छ। सबै को पहिलो, तपाईं एक हप्ताको लागि चीनी र नुन खान सक्दैन।
चकलेट, unsweetened कफी, हरियो चिया वा पानी भन्दा अन्य कुनै पनि उत्पादन निषेधित। पानी कम से कम 1.5 लिटर पिउन दैनिक आवश्यकता। उत्तरार्द्ध भोक को उपस्थिति provokes रूपमा, सामान्य खनिज पानी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। पेय दुई वा तीन घण्टा भित्र मादक पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ चकलेट संग कफी पिउने पछि।
आहार गर्न व्यायाम थप्न गर्नुपर्छ। यो, दौडना गर्न सकिन्छ डोरी, योग, फिटनेस, वा अरू केही हाम फाल्न। पनि सामान्य दैनिक शुल्क यस अवधि एक विशाल पक्षमा ल्याउन सक्षम छ।
यी नियमहरू अनुपालनको लागि7दिन चकलेट आहार, परिणाम बस आश्चर्यजनक दिन सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। यी दिन वजन रिसेट अधिकतम स्कोर पुग्न सक्दैन - प्रति हप्ता7किलो।
वजन लागि शास्त्रीय चकलेट आहार: मेनु
चकलेट आहार त्यसपछि ब्रेक लिन, कुनै थप सात दिन भन्दा लागि पछिल्लो एक महिनाको लागि। आहार चकलेट चकलेट उत्पादन 100 ग्राम को दैनिक खपत पनि समावेश छ। टाइल एक समयमा खाएको गर्न सकिन्छ, र तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। चकलेट प्रत्येक टुक्रा चयापचय बढावा दिन र वजन प्रक्रिया बढावा जो कफी पिउन, unsweetened गर्नुपर्छ। यो पेय कम बोसो संग एक सानो दूध थप्न सक्नुहुन्छ।
चकलेट को स्वागत र कफी बीच मा 1.5-2 लिटर पानी पिउन गर्नुपर्छ। कफी चीनी बिना हरियो चिया प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
खोसिएर नाङ्गै नुन जीव मात्र होइन शरीर बोसो तर पनि अतिरिक्त तरल पदार्थ प्रर्दशन गर्दछ।
परिणाम चकलेट आहार
आहार चकलेट एक सात दिन देखि पछिल्लो गर्न सक्नुहुन्छ। सप्ताह7किलो लिन्छ प्रति यो शक्ति, प्रति दिन अप गर्न 1 किलो को वजन दिन्छ। किलो को महत्वपूर्ण हानि नुन र कम क्यालोरी को पूर्ण तिरस्कार कारण हो।
चकलेट आहार प्रभावकारी छ र लाभ सहित एक नम्बर छ:
छोटो अवधिमा महत्वपूर्ण वजन;
यो एक सानो चकलेट एंटीओक्सिडेंट, flavonoids र अन्य पोषक समावेश प्रयोग गर्न कोका सिमी देखि उत्पादन को उपयोगिता, तर यो मामला मा प्रकट भएको छ;
मस्तिष्क को उत्तेजना।
यो लाभ गर्न साथै, यो आहार शरीर गर्न हानि ल्याउन सक्छौं, कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
शक्ति आपूर्ति प्रणाली को विपक्ष
गर्छ चकलेट आहार हानिकारक छ? निस्सन्देह, हो, किनभने यस्तो आहार सम्पन्न भएको छैन। यो शक्ति पर्याप्त न्यूनतम उपयोगी दैनिक क्यालोरी 1200 किलो कैलोरी भन्दा कम 560 क्यालोरी (चकलेट, प्लस कफी), वरिपरि हरेक दिन प्रयोग गरिन्छ साथ।
छाला, कपाल र नङ प्लेट असर जो शरीर पनि सानो पोषक प्राप्त भएको आहार, को monotony को फलस्वरूप। को dermis मा मुखासे गठन र छाला टोन खैरो हुन्छ। थप यस्तो आहार सेल्युलाईट र sagging छाला को उपस्थिति provokes।
आहार विशेष गरी चकलेट लागि, केहि मिठाई गर्न थप अनिच्छा हुन सक्छ। को हृदय प्रणाली को रोगहरु, पेट, intestines र अन्य स्वास्थ्य समस्या को उद्भव प्रकुपित गर्न, चयापचय विकार योगदान।
फलस्वरूप, यो शक्ति ऊर्जा कमी, अत्यधिक थकान, टाउको दुखाइ, र मांसपेशी टोन को हानि हुन सक्छ।
अन्तमा, जो को वजन चाँडै, नियम, पछि पूर्ण फर्काउन खाली छ। वजन उचित हानि क्रमिक र जटिल हुनुपर्छ।
चकलेट मा इटालियन आहार को नींव
अझ कोमल देखिन्छ इटालियन चकलेट आहार। मेनु द्वारा complemented छ:
जो सानो चिनी समावेश जामुन र फल,;
durum पीठो देखि पास्ता;
कम बोसो र कम क्यालोरी सस;
चकलेट को अनुमति खपत, तर पपकर्नको र additives, केही पागल, उबला अन्डा बिना 30 G। तरकारी र फल को सलाद वा Mash को एक किसिम बनाउन सक्छ। ताजा र उबला मा अनुज्ञेय बीट।
यो आहार तपाईंलाई तेल र बोसो प्रयोग गर्न सक्दैन, र तिनीहरूलाई को कमी चकलेट बनाउन छ। तपाईं खान छैन अङ्गुर, केले, आलु, चिनी, नुन, मासु र माछा। कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ प्रोटीन संग प्रयोग गर्नु हुँदैन। भोजन कच्चा खाएको वा पकाएको गर्नुपर्छ हलचल-frying यहाँ अनुमति छैन। दैनिक रासन छ भोजन विभाजित छ जो तीन मुख्य र अतिरिक्त snacking को नै नम्बर मा।
एक चकलेट मा बस्न गाह्रो भएका ती मानिसहरूको लागि आहार। यो तंग आपूर्ति को तनाव सामना गर्न मद्दत गर्छ। यो पहिलो भन्दा कुनै कम प्रभावकारी, तर स्वास्थ्य को लागि सुरक्षित छ। यो एक हप्ता तपाईं पाँच किलो सम्म गुमाउन गर्न अनुमति दिन्छ।
वजन लागि इटालियन चकलेट आहार: मेनु
प्लस इटालियनहरू को आहार भोजन को धेरै पकाएको सकिन्छ अनुमति खाद्य पदार्थ को छ। यहाँ दिनको लागि कुनै न कुनै मेनु छ:
नास्ता। कागति को रस सट्टा सस, कम बोसो दही वा kefir संग तरकारी वा फल सलाद। तपाईं muesli वा सीमित राख्नु नासपाती, स्याउ को यो समय मा खान सक्छ।
खाजा। कुनै पनि पास्ता सलाद वा लेदो संग durum गहुँ देखि गरे।
खाने। उबला तरकारी वा फल सलाद।
नाश्ता चकलेट, पपकर्न र फल समावेश गर्नुपर्छ।
हरेक दिन तपाईं पानी र थप 1.5 लिटर, साथै गाजर र बीट को रस पिउन गर्नुपर्छ। झिकिएको दुध एक गिलास दिनुभयो।
यो चकलेट आहार मेनुमा सम्भव छैन कफी र खाद्य पदार्थ को एक किसिम छ किनभने, यो क्लासिक को धेरै सुरक्षित संस्करण मानिन्छ।
क्लासिक चकलेट आहार अनुपालन बाहिर हुनुपर्छ पछि, दाँया यसलाई आउनुहोस्। को चकलेट सख्त आहार देखि दैनिक आपूर्ति प्रणाली गर्न संक्रमण क्रमिक हुनुपर्छ। आहार राम्रो fractionally छ पछि खान, एक दिन कम्तीमा छ पटक। overeat छैन, यसलाई adversely पेट असर गर्न सक्छ।
पछि पहिलो भोजन एक कठिन आहार सूक्ष्मता ताजा सलाद, जो तपाईं पनि कागति को रस थप्न सक्नुहुन्छ कटा गर्नुपर्छ। यो पकवान आंशिक भिटामिन को कमी को लागि माथि बनाउन र शरीर roughage सिकाउन सुरु हुन्छ। सबै उत्पादनहरु राम्ररी हुनुपर्छ चपाउनु। साथै, आहार ताजा रस, हर्बल चाय, ताजा फल र तरकारी दिनुपर्छ। त्यो भन्दा उपयोगी पदार्थ समावेश खाना हुनुपर्छ तालिका मा पहिलो पटक हो।
आहार पछि थप मासु र माछा को कम बोसो शोरबा, उबला चिकन, नट, दुग्ध उत्पादन र अन्डा प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यो मांसपेशिहरु को लिनुभएको को गरिब पोषण संग शरीर द्वारा प्रोटिन उत्पादन मांसपेशिहरु भर्न गर्नुपर्छ।
फाराम सुधार र तिनीहरूले मांसपेशीमा झिकेर अभ्यास र छाला को लोच फिर्ता गर्नुपर्छ स्वयंसमर्थता सुधार गर्न।
यो सीधा पोषण जाने र सबै नियमित यातना आफ्नो शरीर आहार भन्दा चीनी, छिटो खाना, पीठो र फैटी बारेमा भूल राम्रो छ।
तपाईं वजन खोने को प्रक्रिया सुरु गर्नु पहिले, तपाईंलाई डाक्टर संग परामर्श गर्नुपर्छ। त्यहाँ जसको लागि तपाईं यसरी खान सक्दैन केही contraindications छन्। यसलाई साथै कफी यसलाई उठ्छ रूपमा मधुमेह र उच्च रक्तचाप संग मान्छे को लागि एक यस्तो आहार गर्न Resort गर्न निषेध गरिएको छ। को पित्त थैली संग कलेजो रोग र समस्या मा चकलेट पोषण प्रयोग नगर्नुहोस्। प्रतिबन्ध आहार को भाग रूपमा खाद्य गर्न एक एलर्जी प्रतिक्रिया हो।
समीक्षा महिलाहरु postroynevshih
तिनीहरूले लागि7दिन प्रभावकारी पर्याप्त चकलेट आहार भन्छन्। समीक्षा यस हप्ता 6-7 किलो गर्न रिसेट छ भन्छन्, तर तिनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ यो दिन। चक्कर आना, थकान, टाउको दुखाइ र थकान परिणामस्वरूप उत्पादनहरु को monotony को थकित। केवल साँझ मा महिलाहरु केही धेरै बलियो भोक छ भोक महसुस भएन, र तिनीहरूले बस चकलेट भन्दा अन्य केहि बारेमा खान चाहन्थे।
केही बालिका पनि यो मोनो-आहार र कमाएको anorexia, पेट विकार र पाचन पर्चा, साथै छाला संग कुनै पनि समस्या संग दूर छन्। पछि यो दीर्घकालीन पुनर्वास उपचार पूरा भएको थियो।
तैपनि, धेरै महिला किलो यस आहार तीव्र हानि र चकलेट खाने को संभावना मा पराउँछु। महिलाहरु सात दिन राम्रो महसुस र कुनै पनि असुविधा महसुस गरेनन्। तिनीहरूले भने, एउटा आवश्यकता छ, त्यसपछि तिनीहरूले यो आहार फाइदा लिन अतिरिक्त किलो को छुटकारा प्राप्त गर्नेछ भनेर याद गर्नुहोस्। महिलाहरु को एक निश्चित भाग खपत alternated गाढा चकलेट को दूध संग, अशुद्धताओं बिना। तिनीहरूले यसरी यो वजन गर्न सजिलो छ भनेर याद गर्नुहोस्।
त्यहाँ भोक निरुत्साहित गर्न, चकलेट गर्न एक सानो पागल थप्न गर्नेहरूलाई छन्। लगभग सबै महिलाहरु आफूलाई लागि बदल आहार, र लगभग कुनै एक शास्त्रीय, सख्त भोजन विकल्प चकलेट कायम।
यो चकलेट को एक आहार मा वजन गर्न सम्भव छ? निश्चित, तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई दिन्छ परिणाम अचम्मको छ, तर यो सबै त्यस्ता खाना फिट छैन, र केही महिलाहरु आहार नकारात्मक प्रतिक्रिया को धेरै कारण।
अल्बर्ट Hoffman - स्विस रसायनविद्, एलएसडी को पिता: एक जीवनी
पदार्थ को मात्रा के छ र मापन
"खराब असल मानिसले।" चित्रकारी कला काम को चोरी
गाजर संग कोरियाली खीरे। व्यञ्जनहरु
किर्नाले द्वारा लगे रोगहरु: लक्षण। रोग जो टिकटिक वहन?
साधारण - मूल फल
धूम्रपान भांग को नतिजा
इगोर Keblushek - क्यारियर र अभिनेता, व्यापारी र कूटनीतिज्ञ को भाग्य